RW Khayrre oo shaaciyey wixii uu kala kulmay Qadar & kulan dhacay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka RW Khayrre oo shaaciyey wixii uu kala kulmay Qadar & kulan dhacay
RW Khayrre oo shaaciyey wixii uu kala kulmay Qadar & kulan dhacay
(Dooxa) 30 Juun 2020 – Waxaa maalin dhowayd dalka Qadar u duulay RW Xasan Khayrre iyo wefdi uu hoggaaminayo, kaasoo halkaa kula kulmay madax ka tirsan dalkaasi.
”Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar kula kulmay Ra’iisul Wasaare ku-xigeen, ahna wasiirka arrimadda dibadda Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani,” ayaa lagu qoray bogga Xafiiska Xukuumadda.
Yeelkeede, si saaxi ah looma faahfaahinin wixii ay ka wada hadleen labada dhinac iyada oo lagu koobay in kulanka looga hadlo qaab dul ka xaadis ah.
”Kulanka dhex maray Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo mudane Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood, iskaadhiga dhaqaalaha iyo aminga.
”Qatar ayaa kamid ah Dowladaha shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed sida joogtada ah uga taageera hir-gelinta mashaariicda horumarineed iyo dib-u-dhiska dalka.” ayaa lagu soo af meeray warkan kasoo baxay Xafiiska RW Khayrre.
Previous articleDHEGEYSO: Xiriir wayn oo ka dhexeeya dembiyada HALISTA ah & cudurrada dhimirka ku dhaca
Next articleMW Sicidi Deni maka baaqsanayaa shirka Muqdisho, maxaase ka dhalan kara? (Siyaasiyiin qar iska tuur ku tilmaamay warkii…)